CNC umshini isikhungo workshop - Yuyao Jera Line lokulinganisa Co., Ltd.
Jera umugqa ifa ubuchwepheshe CNC izinto ukucutshungulwa, kungcono ukulawula ezenzakalelayo amathuluzi machining (ezifana sokuzivivinya, amathuluzi isidina, lathes) futhi 3D amaphrinta esebenzisa ikhompyutha. Umshini usebenza ucezu lwento (insimbi, ipulasitiki, ukhuni, i-ceramic, noma inhlanganisela) ukuhlangabezana nokucaciswa ngokulandela imiyalo ehlelwe ngamakhodi futhi ngaphandle kwe-opharetha yezandla. Senza i-R & D futhi sithuthukise imikhiqizo ehlobene nokukhiqizwa yilo buchwepheshe.
Ku-CNC isikhungo somsebenzi esisebenza esitolo sikhiqiza ingxenye yezingxenyekazi zekhompiyutha yemikhiqizo yethu ejwayelekile, njengezibopho zehange, izibopho zokumiswa.
Izinto zokusetshenziswa esizisebenzisile ziyinsimbi efana ne-Aluminium, iCopper, i-Brass njll. Izinto zokusetshenziswa esizihlola ngokungenayo kulandela i-ISO 9001: 2015, kanye nezidingo zethu zangaphakathi.
I-CNC ingukuthuthuka okukhulu ngaphezu kwemishini engeyona eyekhompyutha ukuthi i-mush ilawulwe ngesandla.
Ngalobu buchwepheshe, i-jera fiber iyakwazi ukuthuthukisa imikhiqizo emisha noma ukwenza ngokwezifiso ibanga lomkhiqizo wamanje ukuze ikwazi ukuncintisana kakhulu, futhi ikwazi ukunikeza amakhasimende ethu okunikezwayo okufanelekile nekhwalithi ephezulu.